I-DroidScript ikhokhiswa ngokukhwabanisa kwesikhangiso nokwephula izinqubomgomo ze-PlayStore | Kusuka kuLinux
IDroidScript isolwa ngokukhwabanisa kwezikhangiso nokwephula izinqubomgomo ze-PlayStore
I-DroidScript iyithuluzi lokufaka amakhodi lokho kwenza kube lula ukuthuthukiswa kwezicelo zeselula, yi uhlelo lokusebenza olwaziwayo, ngoba kungenzeka ukubhala nokuhlela ikhodi, kanye nokwakha izinhlelo zokusebenza ngqo kwi-smartphone noma ithebhulethi ukuzisebenzisa ngokuhamba kwesikhathi, ngaphezu kokunikeza amathuba amaningi.
Uhlelo lokusebenza, eselivele lilandwe izikhathi ezingaphezu kwesigidi, lisetshenziswa ngonjiniyela, abafundi nothisha. UDavid Hurren, umsunguli weDroidscript.org, ufake isimangalo kuGoogle ukunikeza ukucaciseleka ngalokhu, kepha kuze kube manje ayikho impendulo egculisayo.
Ngokusho kukaDavid, abakaze benze noma iyiphi inkohliso yokukhangisa Futhi kunesibhengezo esisodwa kuphela kuhlelo lokusebenza ukumboza izindleko eziqhubekayo zokugcina ibhizinisi liqhubeka.
“Uhlelo lwe-Google Play lumemezele uhlelo olungayilungele ikhompyutha lwe-DroidScript futhi lusisola ngokukhwabanisa kwezikhangiso! Akudingeki ukuthi sisho, sicasuke ngokweqile futhi sishaqekile ngalokhu kusolwa okushaqisayo.
“Njengoba kungenzeka abanye benu baqaphele, basuse iDroidScript ku-Play Store cishe emasontweni amabili edlule. Kusukela lapho besilokhu sikhalaza ngokuxoshwa kwethu futhi sivikele ngokuqinile ubumsulwa bethu futhi safuna incazelo, kodwa i-Google ngeke ilalele futhi i-Google ngeke ichaze ukuthi yini esenze kabi!
“Lokhu kuzothinta abantu abaningi, iDroidScript inabasebenzisi abangaphezu kuka-100.000 XNUMX emhlabeni jikelele futhi isetshenziswa njengethuluzi lokufunda kothisha abaningi, abafundi kanye nabantu abazilibazisa, kanye nama-coders akhokhelwayo.
"SICELA usisize silwe nalokhu kungabi nabulungisa ngokusabalalisa izindaba eziphathelene nokuphathwa ngendlela engafanele ngama-tweets nangokuthumela izixhumanisi kule ndatshana ezithangamini zezindaba nezobuchwepheshe." Futhi finyelela kunoma yimuphi umgqugquzeli wezokuxhumana ongamazi. Uma singenza umsindo owanele ngakho, abakwaGoogle bangaba namahloni ngokusiphatha kahle.
"Ngiyabonga ngoxhaso lwakho! «
Kusukela NgoMashi 31, iDroidScript ithole isaziso se-imeyili ukuthi i-akhawunti yakho yomshicileli we-Google / AdMob ikhutshaziwe okwe "traffic okungavumelekile". Okweqembu, lokhu akuvelanga ndawo futhi abazi nakancane ukuthi kungani uhlelo lweGoogle "ngokungazelelwe lunqume ukuthi abaluthandi uhlelo lwethu lokusebenza ngemuva kwezinyanga ezingaphezu kwezingu-12 lokuba semakethe yezikhangiso bengenankinga." UDavid usiqinisekisa ukuthi i-DroidScript inesikhangiso esisodwa sesibhengezo esikrinini esikhulu, esangezwe ngokungabaza ukumboza izindleko zokuthuthuka nezokusingathwa.
UDavidi waphendula wathi:
"Ku-imeyili yakho, i-Google isinika ithuba lokufaka isikhalazo, kepha basicela" ukuhlaziywa okugcwele kwethrafikhi yakho noma ezinye izizathu okungenzeka ukuthi ziholele emsebenzini ongalungile ocingweni lwakho. " Nokho, besingazi ukuthi yini engabangela lokhu futhi besingacabangi ukuthi yini esingayenza kuhlelo lwethu lokusebenza ukulungisa le nkinga ngoba iGoogle inikeza imininingwane emincane kakhulu yokusebenza ngale ndlela. Konke i-Google esitshele khona ukuthi "sinomgwaqo ongavumelekile" ongenalo olunye ulwazi futhi okubi kakhulu, isitatimende esithi bebengakulungele ngisho nokusinika eminye imininingwane!
“Ngakho-ke siphenye incazelo ye-Google yokuthi 'ithrafikhi engavumelekile' futhi saqagela kahle ukuthi yini engadala le nkinga, sabe sesifaka isikhalazo sethu. Ukucabanga kwethu okuyinhloko ukuthi omunye wabasebenzisi bethu wayezama i-ID yethu ye-AdMob ngemuva kokuyikhipha ku-APK yethu, kodwa asinabo ubufakazi balokhu futhi ayikho indlela yokuyihlola. Sicabanga ukuthi singaba nenketho yokushintsha i-ID ye-AdMob noma sithole esinye isiphakamiso esivela eqenjini le-Adsense ngesikhathi senqubo yokudlulisa icala.
Ngokumangazayo, ngemuva kwemizuzu eyi-11 kuphela, uphawula ukuthi uthole impendulo nge-imeyili yokwenqaba elandelayo, okungenzeka ukuthi ibe yimpendulo ezenzakalelayo:
"Ngiyabonga ngocingo lwakho. Siyabonga ngentshisekelo yakho kuhlelo lwethu. Kodwa-ke, ngemuva kokubheka imininingwane osinikeze yona, siqinisekisile ukuthi asikwazi ukubuyisa i-akhawunti yakho yomshicileli. Sicela wazi ukuthi i-akhawunti yakho ngeke isathola izinkokhelo. Akafanelekile ukuqhubeka nokubamba iqhaza ezinhlelweni zethu zabashicileli futhi akakwazi ukudala ama-akhawunti amasha. "
Ngaphandle kwalokho ngaphambi kokuthi inguqulo entsha isilungile, I-DroidScript ithathe enye i-hit ebhubhisa nakakhulu ku-Google Play lapho uhlelo lokusebenza lungaphandle kwe-PlayStore:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IDroidScript isolwa ngokukhwabanisa kwezikhangiso nokwephula izinqubomgomo ze-PlayStore
IProxmox VE 6.4 ifika neKernel 5.4, imodi ebukhoma yokubuyisa amakhophi nokuningi